ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (ဗကသ)ဥက္ကဋ္ဌ ကိုကျော်ကိုကိုနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
''သမဂ္ဂကျောင်းသား ဆိုတာက ကျောင်းသားတွေ အားလုံးဟာ သမဂ္ဂကို ၀င်ခွင့်ရှိတယ်။ ဘယ်ကျောင်းသားကိုမှ သမဂ္ဂထဲ မ၀င်ရဘူးလို့ ကန့်သတ်ထားတာ မဟုတ်ဘူး။ သမဂ္ဂအမှုဆောင် ကော်မတီမှာ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ချင်လည်း လွတ်လပ်စွာ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ လူတိုင်းမှာ မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသလို ရွေးချယ်ခံပိုင်ခွင့်လည်း ရှိတယ် . . . အဲဒါဒီမိုကရေစီပဲ။ ဒီ,ဒီမိုကရေစီ အလေ့အထကို တက္ကသိုလ်တွေ၊ ကျောင်းတွေထဲမှာ လွတ်လွတ် လပ်လပ် ကျင့်သုံးဖို့အတွက် သမဂ္ဂဆိုတာ ပေါ်ပေါက်လာတာ …''
ဖြေ – ကျွန်တော်တို့ ပြောင်းလဲဖို့၊ ပြင်ဆင်ဖို့ပြောခဲ့တဲ့ ပညာရေးဥပဒေနဲ့ သူတို့လွှတ်တော်မှာ အတည်ပြုလိုက်တဲ့ ပညာရေးဥပဒေနဲ့က ကွာခြားတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်တို့ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ဖို့ ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဒီမိုကရေစီပညာရေး ကို ဦးတည်သွားဖို့အတွက် အချက်အလက်တွေနဲ့ ပြောခဲ့တာရှိတယ်။ ပြီးတော့ပညာရေး ပုံစံတွေ အကုန်လုံး၊ တစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့အတွက် ကျောင်းသားသမဂ္ဂရဲ့ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေ လိုအပ်တယ် ဆိုတာကို ပြောခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ပိုင်းမှာ အဲဒီအတိုင်း ဖြစ်မလာတာကို တွေ့ရတယ်။ နောက် ကျွန်တော်တို့ ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ ပညာရေးဥပဒေဟာ အခုရေးဆွဲပြီး အတည်ပြုလိုက်တဲ့ ဥပဒေနဲ့ကြားထဲမှာ အင်မတန်မှ ကွာဟချက်တွေ ရှိနေတယ်။ အနှစ်သာရချင်း ခြားနားနေတယ် ဆိုတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဖြေ – တိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့က ရှေ့မှာ သင်ခန်းစာတွေကော၊ အတွေ့အကြုံတွေကော အများကြီးရထားတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့က ဒါ ကမူးရှူးထိုး လုပ်လို့တော့ မရဘူးလေ၊ ဒါတစ်ခုက တိုက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင် စနစ်တကျ ပြင်ဆင်ထားဖို့တော့ လိုတယ်။ အရင်တစ်ခါက ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန်မြို့ ၄ ရက် သပိတ်ဆန္ဒပြပွဲတွေ၊ နောက်ပြီးတော့ မန္တလေးက ရန်ကုန်ချီတက်ခဲ့တဲ့ လမ်းလျှောက် ချီတက်ပွဲတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ပြည်သူတွေပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရင် အားပေးထောက်ခံ ၀န်းရံသူတွေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လိုအပ်ချက်တွေတော့ ရှိနေတယ်။ ဆိုတော့ ဒီတစ်ခေါက်မှာ လိုအပ်ချက်တွေ မရှိအောင် လိုလေသေးမရှိ အရာရာ ပြည့်စုံအောင် လုပ်ဖို့တော့ လိုတယ်။ ဆိုတော့တိုက်ပွဲကို အလောတကြီး တိုက်လို့မရပါဘူး။ တိုက်ပွဲတိုက်တယ်ဆိုတာ ပုံသဏ္ဌာန် ကြွယ်ဝဖို့လည်း လိုတယ်၊ နည်းနာကြွယ်ဝဖို့လည်း လိုတယ်။ နည်းပရိယာယ်တွေ ကြွယ်ဝဖို့လည်း လိုတယ်လို့ မြင်တယ်။ တိုက်ပွဲတိုက်ဖို့ ကိစ္စကို အလောသုံးဆယ်တော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အားမပေးနိုင်ဘူး။ စနစ်တကျ ပြင်ဆင် ပြီးတော့ လုပ်ဖို့လိုတယ်။ ဒီကိစ္စဟာ ထောက်ခံတဲ့၊ ၀န်းရံတဲ့ ပြည်သူနဲ့တင်မပြီးဘဲနဲ့ အဖွဲ့အ စည်းပေါင်းစုံ ကနေပြီးတော့ တစ်သမတ်တည်း ဒီအပေါ်မှာ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်နိုင်တဲ့ အနေအထားအထိ ဆွဲတင်ဖို့လိုတယ် ဆိုတာကို ပြောချင်ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီကျောင်းသားသပိတ်အား ၂၀၁၄ ခုနှစ် မတ်လ ၁၀ ရက်တွင် ဖြိုခွဲခံရပြီးနောက် မတ်လ၂၇ ရက်(တော်လှန်ရေးနေ့)တွင် ဗကသ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုကျော်ကိုကို ခေါင်းဆောင်သည့်အဖွဲ့ ရန်ကုန်မြို့၊ သိမ်ကြီးဈေးအနီးတွင် အမျိုးသားပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် အတွက် ဆက်လက်သပိတ်တိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲခဲ့စဉ်
မေး – အရင်က ဒီမိုကရေစီတောင်းတဲ့ အခါက အစိုးရက အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတယ်။ အခု ဒီမိုကရေစီလို့ ပြောနေတဲ့ အစိုးရက ပညာရေးအတွက် တောင်းတာကို အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းတဲ့ အပေါ်ကော ဘာများပြောချင်သလဲ။
How many years did you study laws. Even, experience lawyers can't draft the law. Myself Ko Ko you are just student, please study how to draft the law and study to understand the law. Do you know what is poliistic and the correct meaning is State development and it is not radical. Please study heard if you love your State.